Xuquuqda carruurtaActuellement sélectionné
12. Waxaad xaq u leedahay inaad ra’yigaaga ka dhiibato dhammaan su’aalaha adiga ku khuseeya. Dadka waaweynina waa in ay dhegeystaan oo tixgeliyaan ra’yigaaga. Marka ay maxkamad ama hay’adi qax ka qabaneyso oo go’aan ka gaareyso arrin adiga ku khuseysa waa in fursad laguu siiyaa inaad ka hadasho.
14. Waxaad xaq u leedahay inaad fekeri karo oo waxaad doonto wax ka oran karto. Waxaad xaq u leedahay inaad waxaad doonto aamminto oo diinta aad doonto raacdo. Waalidkaa waa in ay ku hagaan, laakiin marnaba go’aanka fekradahaaga.
5. Waalidkaa ayaa mas’uul kaa ah. Waa in ay ku siiyaan talooyin iyo hoggaamin marka aad sameyneyso wax qaraarka carruurtu xaq kuu siinayo inaad sameyso.
18. Labadaada waalidka waxaa mas’uuliyad wadajir ah ka saaran barbaarintaada iyo korintaada. Waxayna mar walba ka fekerayaan waxa adiga kuu wanaagsan. Haddii waalidkaa ay bulshada uga baahdaan caawimaad, kolkaas waa in ay bulshadu siisaa caawimaaddaas, oo noqon karta daryeel iyo xannaano carruur.
3. Marka ay dadka waaweyni go’aan ka gaarayaan waxa khuseeya carruurta waa in mar walba lagu saleeyaa waxa ”carruurta u wanaagsan”. Taas oo micneheedu yahay in ay dadka waaweyni mar walba madaxa ku hayaan waxa adiga kuu wanaagsan iyo habka uu go’aankaasi saameyn kuugu yeelanayo. Waxaad xaq u leedahay inaad hesho ilaalinta iyo xannaanada aad u baahan tahay. Ahmiyad la mid ah ayey leedahay in dadka waaweyni ay madaxa ku hayaan waxa ”ilmaha u wanaagsan” marka go’aankaasi saameeyo carruur badan.
27. Waxaad xaq u leedahay inaad u noolaato hab fursad kuu siinaya horumar ka sameyso xag jir, xag maskax, xag caqiido, xag mooraal iyo xag bulshaba. Waalidkaaga ayey mas’uuliyadda ugu weyni ka saaran tahay arrintaas, laakiin waa in lagu caawinaa haddii ay u baahdaan.
33. Waa mas’uuliyadda dalalka in ay kaa badbaadiyaan daroogooyinka iyo wixii kaloo maankaaga doorin kara. Dalalku waa in ay hubiyaan in aan lagu isticmaali karin samaynta iyo iibinta daroogooyinka.
35. Marnaba khasab lagugu ma kaxaysan karo ama lagu ma iibin karo. Dalkaaga ayaa mas’uul ka ah in aysan taasi dhicin.
37. Marnaba laguu ma geysan karo jirdil ama nooc kale oo dibindaabyo ah. Sidoo kale marnaba lagugu ma xkumi karo dil ama xabsi daayin. Haddii lagu qabto, xabsiga lagu dhigo ama lagu xiro adigoo aan raalli ka ahayn, waa in ay noqotaa tallaabadii ugu dambeysey ama waqti gaaban sida ugu suurtagalka badan. Waa in mar walba laguu la dhaqmaa hab xushmad leh adigoo xaq u leh inaan lagugu dhexdarin dad waaweyn. Waxaad xaq u leedahay inaad xiriir joogto ah la yeelato qoyskaaga inta aad xabsiga ku jirto iyo in arrintaada dhaqso wax looga qabto. Xuquuqdaada ku qoran qaraarka
carruurtu wuxuu kaloo khuseeyaa haddii lagu xiro adigoo aan raalli ka ahayn.
40. Haddii lagugu tuhmo fal dembi ama ay caddaato inaad dembi gashay, waa laguu la dhaqmaa hab xushmad iyo qaddarin leh. Hay’adaha aad xiriirka la leedahay inta dacwaddu socoto waa in ay noqdaan kuwo loogu talagalay adigoo kale. Waxaad xaq u leedahay inaad caawimaad ka hesho qof garyaqaan ah. Arrintaada waa in wax looga qabtaa sida ugu dhaqsaha badan. Qofna kugu ma khasbi karo inaad sheegto waxa aad og tahay ama qirato wax aadan samayn.
28. Waxaad xaq u leedahay waxbarasho. Waa inaad dhigataa dugsiga hoose oo lacag la’aan ah.
29. Iskoolka waa inaad horumar uga sameysaa si
walba oo aad ugu diyaargarowdaa inaad nolol
mas’uuliyadqaad ah ugu dhexnoolaato bulsho xor ah. Waa inaad halkaas ka barataa inaad xushmeyso xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha, waalidkaa, dhaqankaaga iyo kan dadka kale iyo dabeecadda.
1. Qaraarka carruurtu wuxuu khuseeyaa carruurta adigoo kale ah oo ka yar 18 sano. Qaraarka carruurta waxaa carruurta iyo dhallinyaradaba loogu yeeraa ”carruur”.
42. Dalkaagu wuxuu mas’uul ka yahay in uu carruur iyo waayeelba ku wargeliyo waxa ku qoran qaraarka carruurta.
Mabaadii'da waaweyn ee sharciga carruurta
Qodobada 2, 3, 6 iyo 12 ayaa noqonaya qodobada aasaaska u ah qaraarka carruurta.
Waxayna qodobadaasi kaa caawinayaan inaad fahanto qodobada kale. Dhammaan qodobada qaraarka carruurtu ka kooban yahay waa kuwo isku xiran.
Heshiiska Caruurta oo ku qoran luqada kala duwan
Xayeeysiiska ninka metala carruurta
Waraaqda xayeeysiiska ninka metela carruurta
​Sharciga carruurta ee iswiidhan
Iswiidhen waa in dadaalka ugu wanaagsan u gashaa sidii looga rumeyn lahaa dhammaan qodobada ku qoran qaraarka carruurta. Waxaa tusaale ahaan ka mid ah in sharciyada iyo xeerarka Iswiidhen ay noqdaan kuwo waafaqsan xuquuqda ku qoran qaraarka.
Iswiidhen waxaa waajib ku ah sugto inaan la illaawin xuquuqda carruurta oo maalin walba laga dhawraa dhammaan laamaha bulshada. Dowladduna waxay hubisaa in carruurta iyo dadka waaweyn labadaba lagu wargeliyo xuquuqda carruurtu leedahay.
Wakiilka carruurta waxey shaqadiisa tahay in ilaaliyo xaqa carruurta iyo dhallinyarada iyo dantooda markey noqoto sida ku qoran wada heshiinta caalamiga xuquuqda carruurta. - SE